Jereo ny valizinao: Tom Cruise tezitra amin'ny valizy halatra
Home » Lahatsoratra farany farany » Hospitality Industry » Jereo ny valizinao: Tom Cruise tezitra amin'ny valizy halatra
Vaovao Mafana • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao lafo vidy • Vaovao • Tourism • Vaovao farany momba ny UK • Etazonia Vaovao Vaovao • Vaovao isan-karazany
Tom Cruise mitsambikimbikina adala
Hieritreritra ianao fa iray amin'ireo kintana Hollywood malaza indrindra eran'izao tontolo izao, tafiditra tao amin'ny ligy iray ianao, saingy toa tsia.
Ilay kintan'ny sarimihetsika amerikana Tom Cruise dia mitifitra ny sarimihetsika Mission Impossible 7 any Angletera. Eritrereto ny superstar toa azy tsy hanana ahiahy amin'ny entana halatra indrindra amin'ny mpiambina miaro ny ainy, ny rantsambatana ary ny zavatra hafa?
Mieritrereta indray, satria i Tommy boy dia nahazo ny entany rehetra, anisan'izany ny entany manokana nangalatra izay mbola tao anaty fiara taorian'ny nahatongavany tany UK.
Ary tsia, tsy ny valizy ihany no nangalarina, ny fiara BMW X7 tenany ihany no nangalatra voalohany.
Na eo aza ny fiara misy amin'ny alàlan'ny fampiasana fitaovana fanaraha-maso dia tsy nisy intsony ny tao anaty fiara.
Cruise dia nandeha nitifitra ny sarimihetsika niaraka tamin'ny mpilalao sarimihetsika Hayley Atwell. Nijanona tao amin'ny Grand Hotel ao an-tanànan'i Birmingham izy nandritra ny fotoana nandraketan-tsarimihetsika ny toerana fiantsenana Grand Central teo akaiky teo rehefa niseho ny halatra.
BMW X7 nijanona tao amin'ny hotely rehefa niseho ny halatra. Ny fandrobana dia nantsoina hoe "haitao avo lenta" amin'ny alàlan'ny dingana 4-dingana izay namela ny fiara tsy misy lakile hovohana amin'ny alàlan'ny famerenany ireo fob amin'ny signal.
Voalaza fa niaraka tamin'ireo valizy an'arivony kilao teo am-pikarakarana ny mpiambina an'i Cruise ireo jiolahy. Angamba ilay mpiambina dia tokony nasaina niambina “ny vatana” fotsiny, fa ny ao anaty fiarany ihany koa.
Tao Birmingham no nitrangan'izany ary na dia haingana ny polisy dia nanara-maso sy nahita ny fiara tamin'ny alàlan'ny fitaovana fanaraha-maso elektronika nampitaovana ilay fiara, rehefa hita dia tsy nisy atiny intsony tao anaty fiara.
Nilaza ny polisy fa nahazo tatitra momba ny BMW X7 (mitentina 100,000 pounds) nangalarina tao Church Street, Birmingham, ny marainan'ny talata maraina. Tafaverina vetivety ny fiara tao Smethwick. Efa natao ny fanadihadiana ataon'ny CCTV momba ny faritra nahitana ny fiara satria mitohy ny fanadihadiana.
Tom dia iray amin'ireo mpilalao sarimihetsika be karama indrindra ao Hollywood izay mitentina 600 tapitrisa dolara US $ 50 tapitrisa isan-taona. Raha ny vola azony isaky ny sarimihetsika, ohatra, dia nahazo $ 75 tapitrisa i Cruise tamin'ny fahaefatra Iraka: Sarimihetsika tsy azo atao, Ghost Protocol. Fantatra amin'ny fanaovana ny diany manokana sy ny fampisehoana fampisehoana nahazo loka maro izy. Fantatra amin'ny sarimihetsika toy ny andiana Mission Impossible, Top Gun, Minority Report, ary Vanilla Sky izy.
Araka ny tatitra dia tezitra i Tom Cruise noho ny halatra nataony.
September 1, 2021 ao amin'ny 06: 18
Nanangana izy ireo fa nanana drafitra tsara To,, manantena fa akanjo fotsiny izy io izay tsy ho zava-poana amin'ny zazakely. Maniry karma ratsy ho azy ireo dia hahazo izy ireo.